Mi Max3နဲ့ Xiaomi Mi Max2ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိနေလဲ ? – Myanmar Mobile App
Mi Max3နဲ့ Xiaomi Mi Max2ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိနေလဲ ?
Posted on July 21, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)
Mi Max3ဟာ 6.9-inch full-HD+ IPS display နဲ့အတူ 2160×1080 pixel resolution ဖြစ်ပြီး 18:9 aspect ratio ဒီဇိုင်းပါ။ Mi Max2ကတော့ 6.44-inch full-HD IPS display သာသုံးထားပြီး 1080×1920 pixel resolution ကိုသာသုံးထားပြီး ပုံမှန်အတိုင်း 16:9 aspect ratio နဲ့သာလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြင်ကွင်းပိုင်းမှာတော့ လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ Mi Max3ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာ dual camera စနစ်နဲ့ဖြစ်ပြီး 12-megapixel sensor + 5-megapixel ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ sensors ၂ခုလုံးမှာ f/1.9 aperture နဲ့ဖြစ်ပြီး LED flash တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Mi Max2မှာတော့ f/2.2 aperture, Phase Detection Autofocus နဲ့ dual-LED (dual-tone) flash တပ်ဆင်ထားတဲ့ 12-megapixel ကင်မရာတစ်ခုသာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Mi Max 3ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ 8-megapixel ဆင်ဆာနဲ့ဖြစ်ပြီး ‘soft’ LED flash ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Max2မှာတော့ f/2.0 aperture နဲ့ 5-megapixel ကင်မရာသာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
hardware ပါဝါစွမ်းအားပိုင်းမှာတော့ Mi Max3မှာ Redmi Note5Pro နဲ့ဆင်တူပြီး 1.8GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 636 ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားပါတယ်။ Adreno 509 GPU ကိုဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိပ်အားရစရာမကောင်းလှပါဘူး။ Mi Max2မှာတော့ 2GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 625 ပရိုဆက်ဆာနဲ့အတူ Adreno 506 GPU ကိုတွဲဖက်သုံးထားပါတယ်။ Snapdragon 636 ဟာပါဝါစွမ်းအားပိုင်းမှာ Snapdragon 630 ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုကောင်းလာပါတယ်။
အချက်အလက်သိုလှောင်မှုပိုင်းမှာတော့ Mi Max3မှာ4GB RAM နဲ့ 6GB RAM ဆိုပြီး ၂မျိုးထွက်လာပါတယ်။ 4GB RAM version မှာ 64GB storage နဲ့ဖြစ်ပြီး 6GB RAM version ကတော့ 128GB storage နဲ့ပါ။ RAM ၂မျိုးလုံးမှာ micro-SD card ထပ်မံ ထောက်ပံ့မှုသုံးနိုင်မှာပါ။ Mi Max2မှာတော့ 4GB RAM နဲ့ 32/64/128 GB storage သာထုတ်ထားပြီး အချက်အလက်ထပ်မံတိုးနိုင်ပါတယ်။ Mi Max3မှာတော့ OS ပိုင်းအတွက် Android 8.1 Oreo အခြေပြု MIUI 9.5 နဲ့ဖြစ်ပြီး Mi Max2ကိုတော့ Android 7.1.1 (Nougat) အခြေပြု MIUI 8.0 နဲ့ထွက်ထားတာပါ။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းမှာတော့ Mi Max2နဲ့ Mi Max3၂မျိုးလုံးမှာ dual-SIM, 4G LTE (VoLTE-ready) နဲ့ USB Type-C ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ IR blaster လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် Mi Home app ကိုသုံးပြီး စမတ်အိမ်လိုမျိုး ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။ ဗားရှင်း ၂မျိုးလုံးမှာ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot နဲ့ဖြစ်ပြီး Bluetooth မှာတော့ Max3မှာတော့ 5.0 ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချက်အလက်တွေ ဝေမျှတဲ့ အချိန်မှာ ပိုမိုမြန်ဆန် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီစွမ်းအားပိုင်းမှာတော့ Mi Max3မှာ Mi Max 2ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ 5,500mAh စွမ်းအားကိုသုံးထားပါတယ်။ Max 2မှာ 5,300mAh ကိုသာသုံးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ စမတ်ဖုန်း၂မျိုးလုံး မှာအားသွင်းမြန် ဆန်တဲ့ စနစ်အတွက် Qualcomm ရဲ့ Quick Charge 3.0 ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
Mi Max3ဟာ 6.9-inch full-HD+ IPS display နဲ့အတူ 2160×1080 pixel resolution ဖွဈပွီး 18:9 aspect ratio ဒီဇိုငျးပါ။ Mi Max2ကတော့ 6.44-inch full-HD IPS display သာသုံးထားပွီး 1080×1920 pixel resolution ကိုသာသုံးထားပွီး ပုံမှနျအတိုငျး 16:9 aspect ratio နဲ့သာလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွငျကှငျးပိုငျးမှာတော့ လုံးဝကှဲပွားပါတယျ။
ကငျမရာပိုငျးမှာတော့ Mi Max3ရဲ့နောကျကြောဘကျမှာ dual camera စနဈနဲ့ဖွဈပွီး 12-megapixel sensor + 5-megapixel ပေါငျးစပျမှုဖွဈပါတယျ။ sensors ၂ခုလုံးမှာ f/1.9 aperture နဲ့ဖွဈပွီး LED flash တပျဆငျပေးထားပါတယျ။ Mi Max2မှာတော့ f/2.2 aperture, Phase Detection Autofocus နဲ့ dual-LED (dual-tone) flash တပျဆငျထားတဲ့ 12-megapixel ကငျမရာတဈခုသာ တပျဆငျထားပါတယျ။ Mi Max 3ရဲ့အရှဘေ့ကျမှာ 8-megapixel ဆငျဆာနဲ့ဖွဈပွီး ‘soft’ LED flash ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ Max2မှာတော့ f/2.0 aperture နဲ့ 5-megapixel ကငျမရာသာတပျဆငျပေးထားပါတယျ။
hardware ပါဝါစှမျးအားပိုငျးမှာတော့ Mi Max3မှာ Redmi Note5Pro နဲ့ဆငျတူပွီး 1.8GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 636 ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားပါတယျ။ Adreno 509 GPU ကိုဂရပျဖဈပိုငျးအတှကျ ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သိပျအားရစရာမကောငျးလှပါဘူး။ Mi Max2မှာတော့ 2GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 625 ပရိုဆကျဆာနဲ့အတူ Adreno 506 GPU ကိုတှဲဖကျသုံးထားပါတယျ။ Snapdragon 636 ဟာပါဝါစှမျးအားပိုငျးမှာ Snapdragon 630 ၄၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ပိုကောငျးလာပါတယျ။
အခကျြအလကျသိုလှောငျမှုပိုငျးမှာတော့ Mi Max3မှာ4GB RAM နဲ့ 6GB RAM ဆိုပွီး ၂မြိုးထှကျလာပါတယျ။ 4GB RAM version မှာ 64GB storage နဲ့ဖွဈပွီး 6GB RAM version ကတော့ 128GB storage နဲ့ပါ။ RAM ၂မြိုးလုံးမှာ micro-SD card ထပျမံ ထောကျပံ့မှုသုံးနိုငျမှာပါ။ Mi Max2မှာတော့ 4GB RAM နဲ့ 32/64/128 GB storage သာထုတျထားပွီး အခကျြအလကျထပျမံတိုးနိုငျပါတယျ။ Mi Max3မှာတော့ OS ပိုငျးအတှကျ Android 8.1 Oreo အခွပွေု MIUI 9.5 နဲ့ဖွဈပွီး Mi Max2ကိုတော့ Android 7.1.1 (Nougat) အခွပွေု MIUI 8.0 နဲ့ထှကျထားတာပါ။
ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုပိုငျးမှာတော့ Mi Max2နဲ့ Mi Max3၂မြိုးလုံးမှာ dual-SIM, 4G LTE (VoLTE-ready) နဲ့ USB Type-C ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ IR blaster လုပျဆောငျခကျြကိုလညျး သုံးနိုငျမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ Mi Home app ကိုသုံးပွီး စမတျအိမျလိုမြိုး ထိနျးခြုပျနိုငျမှာပါ။ ဗားရှငျး ၂မြိုးလုံးမှာ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot နဲ့ဖွဈပွီး Bluetooth မှာတော့ Max3မှာတော့ 5.0 ဖွဈသှားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခကျြအလကျတှေ ဝမြှေတဲ့ အခြိနျမှာ ပိုမိုမွနျဆနျ လာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဘကျထရီစှမျးအားပိုငျးမှာတော့ Mi Max3မှာ Mi Max 2ထကျပိုမိုကွီးမားတဲ့ 5,500mAh စှမျးအားကိုသုံးထားပါတယျ။ Max 2မှာ 5,300mAh ကိုသာသုံးထားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ပါ။ စမတျဖုနျး၂မြိုးလုံး မှာအားသှငျးမွနျ ဆနျတဲ့ စနဈအတှကျ Qualcomm ရဲ့ Quick Charge 3.0 ကိုထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။
patent အရ clamshell စတိုင်လ်ဖုန်း Apple လုပ်ဆောင်နေပြီဟု ခန့်မှန်း
Posted on February 14, 2019 February 14, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version ဆမ်ဆောင်းနဲ့ ဟွာဝေးတို့ဟာ ခေါက်ချိုးဖုန်းတွေကို ထုတ်ပြဖို့ရက်မတိုင်မီ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီတော့ Apple ကလည်း လိုက်လုပ်ဆောင်တော့မယ့်သဘော ရှိနေပါတယ်။ flexible display နဲ့ hinge(ပတ္တာ) တို့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကို patent တင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ Apple လည်း လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ patent ကိုကြည့်လိုက်တော့ clamshell စတိုင်လ် ခေါက်ချိုးဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားတွေနဲ့တော့ ကွာခြားပါတယ်။ ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီး အိတ်ထောင်တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဖုန်းလေးအဖြစ် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဖြန့်လိုက်ချိန်မှာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ကို အသားပေးထားခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးပါတာတစ်ခုကတော့ form factor မဟုတ်ဘဲ ကွဲထွက်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ patent ထဲမှာ Apple ဟာ hinge တစ်ခုကို အခြေခံထားပြီး သုံးဘားဆက်၊ လေးဘားဆက် […]
သိန်း ၄၀ လောက်ရှိတဲ့ Huawei ရဲ့ ခေါက်ချိုး 5G Mate X
Posted on February 24, 2019 February 24, 2019 Author Ko Nyi
Samsung က သူ့ရဲ့ ခေါက်ချိုး ဖုန်းကို မကြာခင်ကပဲ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ထက် ပါးလွှာပြီး အရွယ်ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ ခေါက်ချိုးဖုန်းကို ဟွာဝေးက ပြသလိုက်ပါပြီ။ Huawei Mate X ကို ဖြန့်ထားရင် ၈ လက်မ 2480x2200p Display ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ခေါက်ချိုးပြီး သုံးရင် ၆.၆ လက်မ 2480x1148p Display ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ခေါက်ချိုးထားရင် အနောက်ဘက်က မျက်နှာပြင်ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အနောက်ကင်မရာများကနေ အရည်အသွေးမြင့် ဆဲလ်ဖီးများ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံးပါပြီး သူ့ရဲ့ Specs များကို ဟွာဝေးက မပြောသေးပါဘူး။ Leica Camera များ ပါလာမှာပါ။ ခေါက်ချိုးထားရင် […]
Posted on October 31, 2018 Author Ko Nyi
Honor က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Magic2ကို တရုတ်မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Screen-to-body Ratio အမြင့်မားဆုံး ဖုန်းများထဲမှ တစ်လုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘောင်ပျောက် ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပြီး အလွန် လှပပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၃၉ လက်မ AMOLED Display ထည့်သွင်းထားပြီး မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာ ပါပါတယ်။ Full HD+ Resolution ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင် အချိုးမှာ 19:9 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘောင်ပျောက်ဖုန်း ဖန်တီးဖို့ အတွက် အရှေ့ ကင်မရာများကို Slider Design ဖန်တီးထားပါတယ်။ Slider မှာ 16MP Camera နဲ့ အတူ 2MP Depth Sensor […]
Nova3စီးရီးဖုန်းသစ်များအား ဇူလိုင်၂၆ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယမှာ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Huawei
The Best USB-C Chargers to Buy